Manabe fandriampahalemana i Londrina - Ny volana martsa
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Manabe fandriampahalemana i Londrina
Manabe fandriampahalemana i Londrina
05 / 09 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ahoana no ahafahan'ny tanàna iray mampiditra ao an-tsaina miaraka amin'ny kolontsaina fandriampahalemana sy tsy fandeferana
Ireo hetsika nokasaina tao Londrina, Brezila, dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny tanàna iray mampiditra ao an-tsaina ny kolontsaina fandriampahalemana.
Efa an-taonany maro ity tanàna ity dia mihazona ny alimanaka ny hetsika ho an'ny fandriampahalemana.
Ity kalandrie ity, tamin'ity taona ity, nifanandrify tamin'ny 2 World March for Peace and Nonviolence, dia nitarina ary tamin'ny alàlan'ny fandehanana teo an-toerana dia manamafy ny dikany.
Ny hetsika dia natolotry ny Movement for Peace and Nonviolence
Ireo hetsika, natao tamin'ny 2 World March dia natolotry ny Movement for Peace and Nonviolence, organisation Londrina Pazeando, izay miasa mba hampivelarana ny kolontsaina amin'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana.
El Kalandrie amin'ny hetsika Ireto misy hetsika manaraka ireto:
Aogositra 28 - Fanokafana ny Totem Trilha da Paz ary Dice momba ny fandriampahalemana.
Septambra 22 - 11º miforitra ao amin'ny farihy ho an'ny fandriampahalemana.
Londrina Hetsika Londrina mihoatra ny fampirantiana fanabeazana miaraka amin'ny lalam-piofanana omen'ny mpampianatra 6,000 ao amin'ny tambajotram-pianarana monisipaly any Londrina.
Oktobra 2 - Fifandraisana miaraka amin'ny fananganana ny 2 World martsa.
Octoberktôbra 5 6º Manifesto ho an'ny fandriam-pahalemana sy famoronana zaza.
Novambra 21 - Mahazo tombo-kase ny mpivarotra Londrina "Tsy kilalao ny fitaovam-piadiana".
Desambra 17 - Tonga any Londrina ny Diabe maneran-tany 2.
Izahay dia manasongadina hetsika iray efa nifarana, ny fanokanana ny valin'ny fandriam-pahalemana Totem sy ny angon-drakitra fandriam-pahalemana
Ao anatin'ireto hetsika efa nomanina ireto dia hanasongadinana hetsika iray efa nifarana isika, ny fanokanana ny Totem Peace Trail ary Data Data momba ny fandriam-pahalemana.
Totem dia dikan-tsarin'ny fampianarana fanabeazana noforonin'i Londrina Pazeando, ho fandraisana anjara amin'ny fanatanterahana ny famerenam-pahefana amin'ny famerenam-bidy any amin'ny Sekoly / Fisorohana herisetra - lalàna laharana 12.467, 6 tamin'ny Desambra 2016 ary hampidirina ao amin'ny tetik'asa Londrina nahalalanao Sekretera monisipaly monisipaly.
Izahay dia mitovitovy amin'ny Living Peace International, izay any amin'ny firenena 161 ary manana ankizy maherin'ny iray tapitrisa mandray anjara amin'ilay tetikasa.
Ny asan'i Londrina dia mifamatotra amin'ny 19 asa fampianarana momba ny fandriampahalemana ao amin'ny MDG sy ny SDG, fa ny fototry ny atrikasa Initiative ho an'ny fananganana kolontsaina fandriampahalemana.
Hetsika iray hafa hasongadinay koa ny famihina 11º ao amin'ny Farihin'ny Fiadanana.
Amin'ity hetsika ity, izay mahatratra ny andiany iraika ambin'ny folo amin'ity taona ity, ny hanodidina ny farihy amin'ny tanànan'ny olona izay mamehy azy.
Farany, ary tsy satria tsy ny zava-nitranga rehetra no horesahintsika ny hetsika izay handraisan'ny mpivarotra Londrina ny tombo-kase "Ny fitaovam-piadiana dia tsy kilalao."
Androany misy 82 mpivarotra ao an-tanàna miaraka amin'ny fanamarinana izay manondro ireo orinasa tsy amidy kilalao mitovy amin'ny basy.
Tamin'ity taona ity, dia nomena ny fanamarinana ireo mpivarotra 34, avy amin'ny inspektera monisipaly monisipaly
Tamin'ity taona ity, dia nomena ny fanamarinana ireo mpivarotra 34, notarihin'ny sekretera ara-bolan'ny monisipaly taorian'ny fangatahan'izy ireo ny handray anjara amin'ny fanentanana. Amin'izy ireo, 13 no nangataka ny fanamarinana voalohany ary nanavao ny fampiharana i 21. Ny orinasa dia afaka mametraka ny tombo-kase eo amin'ny toerana hita maso ary mampiasa izany amin'ny dokambarotra mandritra ny roa taona, izay tsy maintsy havaozina.
Ity volana novambra 21 ity dia taona fahasivy izay hatolotra ilay tombo-kase ho an'ireo mpivarotra nangataka azy ary nanaiky ny fanoloran-tena.
Azo jerena amin'ireto ohatra kely ireto ihany fa i Londrina dia tanàna mampiditra ny kolontsaina fandriampahalemana ho azy manokana.
Ny bokin'ny dokam-barotra laureate ao Madrid
1 fanehoan-kevitra amin'ny "Londrina manabe for Peace"
Pingback: 2 ° World March ny Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando